भनेकै समयमा ग’र्भ बस्नका लागि यो समयमा यौ’न सम्पर्क गर्नुपर्छ l…. – News Nepali Dainik
भनेकै समयमा ग’र्भ बस्नका लागि यो समयमा यौ’न सम्पर्क गर्नुपर्छ l….
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७ समय: १०:२६:४७
नेपालमा पछिल्लो समय बाँझोपन एक जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसमा महिला र पुरुष दुबैको गल्ती हुने जानकारहरु बताउँछन । लामो समय देखि डा. सबिना सिम्खडा यस क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी छिन् । उनले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो ।
उनले यो तीन बर्षमा हजारौं निःसन्तानको पीडा खेपेका महिलाहरुलाई आमा बन्न सहयोग गरेकी छन् । निःसन्तानपन भएर उपचारको लागी नेपाल बाहिर जानेहरुलाई नेपालमै उपचार सम्भव छ भनेर देखाएकी छिन् । पछिल्लो समय निःसन्तानपनको बारेमा जनचेतना फैलाउँदै त्यसबाट जोगिन समेत डा.सिम्खडा आग्रह गर्छिन् ।
बिहे गरेको एक बर्ष सम्म पनि कुनै पनि अस्थायी साधनको प्रयोग बिना शारिरक सम्पर्क गर्दा बच्चा बसेन भने बाँ’झोपना हुने उनी बताउँछिन् । उमेर जति बढ्दै गयो उत्तिकै बाँ’झोपना हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । उमेरको हकमा ३० बर्ष माथि अझ बढी जोखिम हुने सम्भावना रहन्छ ।
दैनिक जस्तो शारिरिक सम्पर्क गर्दा वा म’हिनावारी भएको १० देखी २० दिन भित्र सम्पर्क हुँदा पनि बच्चा बसेन भने तुरन्त सम्बन्धीत चिकित्सकलाई देखाउनु पर्ने उनले सुझाएकी छिन् । पहिले नेपालका बिरामीहरु भारत जान्थे तर अहिले भारतबाट बाँ’झोपनाको उपचार गर्न नेपाल आउने गरेको डा.सबिनाको अनुभव छ । उनको क्लिनिकमा पनि धेरै भारतीयहरु आएर सेवा लिएका छन् । स्रोत : जनबोली
Last Updated on: February 7th, 2021 at 10:26 am
१३३०४ पटक हेरिएको